I-Lenovo Z6 Pro izakufika ngo-Epreli 23 phantsi komdlalo weLegion wokudlala | I-Androidsis
I-Lenovo Z6 Pro izakufika ngo-Epreli 23 ngokusebenzisana nomdlalo weqonga weLegion
ULenovo uqinisekisile namhlanje ukuba iflegi I-Z6 Pro izokwazisa nge-23 ka-Epreli eBeijing, China. Emva kokungqinisisa, inkampani ikhuphe i-teaser entsha kwisixhobo esiqinisekisa ngakumbi ezinye iinkcukacha ngesixhobo.
Iakhawunti esemthethweni yeLenovo Mobile kaWeibo ikhuphe ingxelo yangaphambili yefowuni kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo. Lo mfanekiso uyakuqinisekisa oko Ifowuni iza kuphehlelelwa ngentsebenziswano neLenovo's Legion brand. Oku kusixelela ukuba isixhobo siza kuza neempawu ezahlukeneyo ukuphucula amava emidlalo.
Kwabo bangaziyo, Umkhosi luphawu lokugxila kwimidlalo oluvela eLenovo, eyatyhilwa kwiminyaka embalwa edlulileyo. Kuyafana nomgca wePredator ovela kwi-Acer kunye nochungechunge lwe-ROG oluvela kwi-ASUS. Ngenxa yobumbano lwayo kunye nophawu lomdlalo wenkampani, kuyacaca ukuba iLenovo Z6 Pro iza kuza neempawu ezithile zemidlalo, njengoko besitshilo ngokufanelekileyo.
Ukongeza kulo mbutho wophawu, sinokufumana okungakumbi malunga nomphambili wefowuni. Emva kokudlala ngokuqaqamba komfanekiso, kuyatyhilwa ukuba I-Lenovo Z6 Pro iza kuza ne-bezels eziphezulu ezantsi. Kwezinye iindawo, ii-bezels ngokusisiseko azikho. Nokuba phezulu, iseti yentloko ingena ngaphakathi kwiprofayili encinci kakhulu, iqinisekisa ukuba umlinganiso wesikrini ukuya emzimbeni uphezulu kakhulu.
I-Lenovo Z6 Pro phantsi komanyano lomdlalo weLegion
Kanjalo, Olu lwazi luvela kunikezelo hayi kwisixhobo sokwenyani. Ukuthathela ingqalelo ukuba itiers ezisemthethweni ziyathanda ukufihla ezona bezels kwii-smartphones zazo, kuya kufuneka silinde kwaye sibone ukuba ngaba eyona Z6 Pro inenqanaba eliphezulu lomzimba.
Ukongeza kwii-bezels zayo eziphezulu, kuyaqinisekiswa ukuba iselfowuni inenguqulo Ngaphezulu del IQualcomm Snapdragon 855. Ukongeza, iya kuxhotyiswa nge Ikhamera yeHyperVision ngemowudi ekhethekileyo yevidiyo ebizwa ngokuba yiHyperVideo.Ngaphandle koku, kukwakho namahemuhemu okuba iZ6 Pro inokubamba iisampulu kwiikhamera ze-100 MP. Nangona kunjalo, asinazo ezinye iinkcukacha koku. Kungekudala siza kutyhila ulwazi oluthe kratya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Lenovo Z6 Pro izakufika ngo-Epreli 23 ngokusebenzisana nomdlalo weqonga weLegion